Shiinaha Doypack Istaag-saareyaasha ayaa kiish oo Shirkado cusub | DingQi
Istaag boorso weyn loo isticmaalaa in our nolol maalmeedka. Waxaan ku arki kartaa cunto badan sida qaxwada, nuts, cunto fudud, jery hilibka lo'da, awood protein, bur buuxiyey by istaag boorso la jiinyeer. Maanta, waxaynu u qori this article inay soo bandhigto istaag boorso.
First aan ka hadlo waxyaabaha la. Nooca koowaad waa Kraft u istaagaan koley. Laga soo bilaabo magaca, waxaynu og nahay waxaa jira wax warqad boorso ah. Dhab ahaantii waxaa jira ugu yaraan saddex wax layers: warqad Kraft / VMPET / PE ama warqad MOPP / Kraft / VMPET / PE. Oo dhumucdiisuna waxay of warqad unprinted istaag boorso waa sida caadiga ah 150mic. Oo daabacay warqad Kraft kiish u istaagaan, oo dhumucdiisuna waxay noqon kartaa 160mic. Nooca labaad waa caag istaag koley. macaamiisha qaar ka mid ah sida saamayn matte, Sidaas daraaddeed waxaa waa matte istaag boorso. macaamiisha qaarkood waxay door bidaan saamayn dhalaalaya, sidaas darteed waxaa jira dhalaalaya istaag boorso.
Second aan ka hadlo si faahfaahsan u istaagto boorso. Waxaa jira gusset hoose on boorso ah (hoose). Waxaa jira jiinyeer on top of kiish, kaas oo ha karo koley isticmaali karo. Haddii aad rabto in aad dalool gaajoonayay, waxaan ku dari kartaa on top of boorso lacag la'aan. Waxaa jira laba nooc oo ah godka hang, mid waa Round laalaadaan godka. Nooca kale waa dalool Euro hang.
wax Saddexaad, waxaan rabnaa in aan ka hadlo daabaco. Koley isticmaali technology daabacaadda Gravure. Sidaas waxaa jira CMYK, midabka cad iyo midab bar. midab kasta u baahan tahay saxan weyn oo si aad u daabacdo. Sidaas darteed haddii aad leedahay 6 midabada, waxay u baahan yihiin 6 saxan si aad u daabacdo.
Ugu dambeyntii, waxaan doonaya hadlay oo ku saabsan MOQ. MOQ waa 5000pieces halkii farshaxanka ama size. Maxaad 5000pieces, ma 4000pieces, 3000pieces ama xataa 1000pieces? Geedi socodka ah ee samaynta boorso waa mid aad u adag. Waxaa jira saddex habka ugu muhiimsan: 1) daabacaadda, laminating la lakabka kala duwan ee wax, cuting. tallaabo kasta u baahan tahay badan oo film oo duudduuban in ay beddelaan mishiinka. Boorso iyocadhadii la dhigay mid mid. Xitaa aad rabto in aad hal bac oo keliya, geeddi-socodka waa isku mid. Sidaas kharashka shaqada iyo wax kulan ku biiro waa isku mid. Sidaas qiimaha guud ee dhigi bacda mid isnt badan oo kala duwan ka qaadashada kiish 5000pieces.
waqti Post: Apr-25-2019
Dambiisha Kraft Paper Resealable , Clear caaga istaag Up koley , Istaag Up Baakada caaga beddelo , Istaag Up Baako beddelo , Istaag Up Dambiisha beddelo , oo cad cad istaag Up koley ,